Eldoret 22 Diceber 2002
Ku: Dhamaan Beelaha Reer Banaadiriga ee Ku nool dibadda iyo Gudaha dalka
Ujeedo Wargalin iyo qeeylo dhaan
Waxaan idii la socoodsiineeynaa in la wado Shir qool ku saleeysan Bur burin Qowmiyadda Banaadiriga
Taas oo ay wadaan Dad naga mid ah oo ay kala yahiin .
Dadkaan aan kor ku soo xusay waxaay diidanyahiin wada jirka reer banaadir waxayna sii gaar u diidanyahiin Dadka ku abtirsadda Bahweeyn Reer Baraawe , Baajuun iyo Carab Soomaali .
Qofna kama dah soona in dadkaan ay yahiin dad u dhashay Beelaha Banaadiriga waana dad aan ka mid aheeyn Beelaha ,Hawiiye, Daarood, Dir iyo Digil & Miriifle. Taasina waxaay cadeeyneeysaa in ay kala jab imaan doono hadii aan xuquuqdooda dafirno ama aan dhahno managa tirsantahiin .
Madaama Gudoomiyaha Reer banaadirga u dooda Xuquuqda Banaadiriga oo dhan ,waxay noqoon kartaa In Wuxuu u dagaalamaayay noqoto-karto Koox jacleeysi iyo xaqiraad xuquuqeeyd dad ka mid ah kuna abtirsada Beesha reer Banaadir.
Ugu danbeeyntii waxaan ku soo gaba gabeeynayaa dadkaan aan kor ku soo xusnay ay damac sanyahiin in ay Bur buriyaan Guusha iyo Sharafta u soo hooyay Gu’doomiyaha Qowmiyadda Banaadiriga Mudane Maxamed Cusmaan Maye dadka Beelaha Banaadiriga ayna doonayaan in ay dib ugu celiyaan Magacii aan ka dhiidhinay aanu diidnay oo ahaa OTHERS .
Sidaasi darteed waxaan idiinka Codsanayaa in si deg deg ah aad ugu soo tala bixisaan arrintaan si ay midnimada reer Banaadir ku Burburin.
Halkaan waxaan idinku soo gudbineeynaa Habka aan u qeybsanay xubnaha aan helnay:
(1) XAMAR -sideed xubnood ( 7 )
(2) BARAWE –laba xubnood ( 2 )
(3) MARKA – labo xubo ( 2 )
(4) BAAJUUN –labo xubnood ( 2 )
(5) JAZIIRA-GANDARSHE ( 1 )
(6) CARAB-SOMALI ( 2 )
Totaal _________16 Xubnood
Wabi laahi Toowfiiq
Gudoomiyaha Qowmiyada Reer Banaadir
Mudanne Maxamed Cusmaan Maye